शब्दकोश: आह् ! उनीसँगको साइनो र अनुरागको भाका
Posted by Jotare Dhaiba at Wednesday, December 24, 2008
धन्यबाद धाइबाजी! ब्लगको बारेमा जानकारी पाउँदा खुशी लाग्यो।
धेरै पहिला पढेको एउटा कथा-संग्रह र 'शिरिषको फूल'मा उहाँले लेख्नुभएको भूमिका बाहेक शंकर लामिछानेका कृतिहरु पढ्ने सौभाग्य मिलेको छैन। यो ब्लगको माध्यमबाट मेरो 'लामिछाने-यात्रा' पनि अघि बढ्ने विश्वाश छ।
तपाईँहरुको लगनका लागि हार्दिक धन्यबाद!
दीपक जडित December 24, 2008
मैले गर्न त के नै सकुँला र भन्ने मात्रै हो र त्यो शुभकामना हो तपाईंको यस पुण्य कार्यको निमित्त , यसमा तपाईँहरु सफल हुनैपर्छ ।
Dilip Acharya December 25, 2008
निकै प्रशंसा र स्वागत योग्य शुरुवात गर्नु भएछ ।
तपाइ लागाएत शंकर स्मृति घर बनाउने सबैलाई हार्दिक साधुबाद् सहित।
आफुले राम्रा काम गर्न नसके पनी असल काम को लागी साथ दिन पाउदा पनि धन्य मान्नु पर्ला ।
अनि म दीपक जी संग सहमत छू र दिलीप जी कै भाकामा तपाईलाई साधुबाद !
उजेली December 26, 2008
शङ्करस्मृति ब्लगको संयोजन गरेर तपाईँले एकदमै राम्रो कामको थालनी गर्नुभएको रहेछ । आशातीत सफलता प्राप्त होस् तपाईँलाई !! धेरै धेरै शुभकामना !!
Jotare Dhaiba December 31, 2008
शङ्करबारे यस्तो आम चासो र तत्परताको लागि अत्यन्तै खुसी छु । शङ्करलाई साझा बनाउने र निबन्ध साहित्यको ठेला परेको ओटमा पैयाँ ठोक्ने मेरो त सानो टाउको उठाइ मात्र हो । भर त तपाईँहरूकै छ । विश्‍वास छ, शङ्करलाई यति चाहने आजका प्रेमी पुस्ताले शङ्करमा अर्पित यस ब्लगलाई मन-वचन र कर्मले राम्रै भरथेग गर्नुहुनेछ । यही विश्‍वासको जगमा उक्त स्मृति घरको खाँबो गाडिएको हो । बाँकी सिकर्मी र ज्यामी काम त तपाईँ-हाम्रै काँधको मन्तर हो । जुट्नेछौँ ।
बेदनाथ पुलामी ( उमेश ) December 31, 2008
ल एकदम राम्रो ।यस काममा मैले पिन केहि सहयोग गर्न सक्छु भने भन्नुहोला है । I slaute ur spirit
Jotare Dhaiba January 11, 2009
Thanks Bednathji N Avinashiji,
Ya Avinashi, Never fulfil this creation without u frens' co-operation.
You may provide your n others essays.